एक यस्ता राष्ट्रपति जसले विलासी जीवनलाई कहिल्यै महत्व दिएनन्
19 Aug 2019 | सोमबार, २ भदौ, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
शुक्रबार, ४ माघ, २०७५
एजेन्सी–दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वेको जब कुरा चल्छ तब यहाँका पुर्व राष्ट्रपति जोस मुजिकाको नाम सबैभन्दा पहिला लिने गरिन्छ । मुजिया विश्वका एकमात्र यस्ता लिडर हुन् जसलाई सबैभन्दा गरिब नेता हुन् ।
मार्च, २०१५ मा उनले राष्ट्रपति पदबाट राजिनामा दिएका थिए । राजिनामा दिनु अघि उनले आफ्नो तीनवटा खुट्टा भएको म्यानुअल र चारवटा खुट्टा भएको बिटलसँग समय बिताउन समयको आवश्यता परेको बताएका थिए ।
म्यानुअल उनको घरपालुवा कुकुरको नाम हो भने बिटल गाडीको नाम हो ।
मुजिकाले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा उरुग्वेलाई धनी बनाउन सफल भएका थिए । तर, उनी आफु भने कंगाल बनिरहे ।
विश्वकै गरिब राष्ट्रपतिमा गनिने उनले आफ्नो जीवन फिरेन्तेको रुपमा बिताए । जोस राष्ट्रपति भवनमा बस्नुका सट्टा उनी २ वटा कोठा भएको घरमा बस्ने गर्थे । सुरक्षाको नाममा उनी जम्मा दुई जना प्रहरीको सेवा लिने गर्थे । आम मानिसले झै उनी कुवाबाट पानी भर्ने सम्म गर्छन् । आफ्नो कपडा आफै धुने गर्छन् । मुजिका आफ्नी पत्नीसँग मिलेर फलफुल खेतीमा व्यस्त रहन्छन् । यो उनको आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।
खेतीका लागि ट्याक्टर पनि उनी आफै चलाउने गर्छन् । ट्याक्टर खराब भए पनि मेकानिक आफै बन्छन् र बनाउने काम गर्छन् । मुजिकाले नोकर चाकर पनि राखेका छैनन् । आफ्नो पुरानो फक्सबैगन बीटल आफै चलाएर अफिस जाने काम उनी गर्थे । अफिस जादाँ भने कोट प्यान्ट लगाउँछन् । तर, घरमा बस्दा उनी निकै सामान्य कपडा लगाउँछन् ।
एउटा देशका राष्ट्रपतिलाई जे सुविधा मिल्नुपर्ने हो त्यो सबै सुविधाहरु मुजिकालाई दिइएको थियो तर उनले लिन अस्विकार गरेका थिए । तलब स्वरुप उनलाई १३,३०० डलर मिल्थ्यो तर १२ हजार डलर उनले गरिबलाई दान गरिदिन्थे । १३०० डलरमा मध्ये ७७५ डलर साना कारोबारीहरुलाई दिन्थे ।
रवि लामिछाने बचाउँ संघर्ष समितिका अध्यक्ष सरोज घिमिरेले किन दिए राजीनामा ?
काठमाडौँ । शान्तिपूर्ण कार्यक्रमका लागि समिति गठन गरिए पनि व्यक्ति विशेषले आन्दोलनलाई विथोल्ने प्रयास गरेको भन्ददै रवि लामिछाने बचाउँ संघर्ष समितिका अध्यक्ष सरोज घिमिरेले राजीनामा दिएका छन् ।
बसीरद्वारा साउदी अरबसँगबाट नौ करोड डलर लिएको स्वीकार
एजेन्सी । केही महिना पहिले अपदस्थ गरिएका सुडानका पूर्व सैनिक शासक अमेमार अल–बसीरले साउदी अरबका राजकुमारबाट नौँ करोड अमेरिकी डलर नगद लिएको अनुसन्धानका क्रममा स्वीकार गरेका बताइएको छ ।
खोइ मुक्त हलिया वस्तीमा सेवा सुविधा ?
कञ्चनपुर । कञ्चनपुको पुनर्वास नगरपालिका– ९ मोतियापुरमा रहेको मुक्त हलिया वस्ती । वस्तीमा आधारभूत सेवा सुविधा नहुँदा मुक्त हलिया परिवार कष्टकर जीवन बिताउनु बाध्य छन् ।
यस्ता ब्लड ग्रुप भएका व्यक्तिलाई हर्ट अट्याक हुने सम्भावना बलियो हुन्छ
एजेन्सी । बदलिदो लाइफस्टाइलका कारण स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्न थालेको छ । यसैका कारण मानिस विभिन्न रोगको शिकार हुन थालेको हो । पछिल्लो समय मुटुका रोगीहरु उच्च संख्यामा बढिरहेका छन् ।
यस्तो रहेको छ सोमबारको तपाईको भाग्य– भदौ २ गते
यस कारण ब्रोकाउली खानुपर्छ
स्वार्थी मानिस कसरी चिन्ने, यस्ता उपायहरु लगाउनुहोस्
एजेन्सी–कुनै पनि स्वार्थी मानिससँग जीवन काट्न एकदमै गाह्रो काम हो । जो मान्छे आफ्नो बारेमा मात्र सोच्छ र अरुको वास्था नै गर्दैन त्यस्ता मानिसहरुका कारण जीवनमा धेरै समस्याहरु आइपर्ने गर्छन् ।
भगवानलाई बासी फुल चढाउँदा तपाईको जीवनमा यस्ता समस्याहरु आउन सक्छन्
के कारणले गर्दा महिलाहरु कुरा लुकाएर राख्न सक्दैनन्
अजबगजबका शहरहरु जहाँ कर पनि तिर्नुपर्दैन